IApartment yaseValsa-EuroVelo7, Vliněves (Mělník)
Dolní Beřkovice, Středočeský kraj, Czechia
Indawo yokuhlala ekhululekileyo ukuya kuthi ga kwi-4 yabantu kwindawo ecocekileyo kwi-"Elbe Cycle Route" (Elberadweg, EuroVelo7), kwilali encinci, yidolophu eyimbali yaseMělník.
!!! Kuphela i-40 min drive ukuya kwiziko le-PRAGUE (imizuzu engama-30 ukuya kwi-P + R, iMetro).
-Abahambi ngebhayisekile ecaleni komlambo i-Elbe
-abakhenkethi abaneemoto abanqwenela ukuphonononga iPrague entle kunye nezinye iindawo ezingaziwayo kodwa ezingekho ngaphantsi ezintle zeBohemia.
- UKUHAMBA, UKUHAMBA IBHAYIKILE, UKUBALEKA, UKUSIKA EMNXENI, UKUQUBHA, UKULOBA & UKUPHUMULA
Iindwendwe zonwabela UBUCWANO OBUPHELELEYO kwigumbi lam. Nangona indawo yokuhlala iyinxalenye yendlu yam, yahluke ngokupheleleyo kwindawo yam yokuhlala. IneNDAWO EYAHLUKILEYO kunye neNDAWO YOKUPAKA IMOTO ngqo phambi kweefestile zayo (indawo zokupaka ezininzi ziyafumaneka kwi-50m ukusuka kwiflethi). Ukuba iindwendwe zihamba NGEBHAYIKILE bangazimisa (bazihlawulele) kwindawo echongiweyo ngaphakathi kwindlu.
Indlu iyigumbi elingama-40 m2 elinesilingi ezintle ezigudileyo. Esi sithuba sahlulwe kwiindawo ezi-2 - eyona ndawo iphambili YOKUPHILA kunye neebhedi ezi-2 ezingatshatanga (i-90 cm ububanzi), ibhedi ye-sofa (i-140 cm ububanzi bebhedi ephindwe kabini), iKITCHEN exhotyiswe ngokupheleleyo (ungaze ube nefriji engenanto;), umpheki, i-oven, izitya) , itafile yokutyela&izitulo kunye neBHAFU elineshawa, indlu yangasese kunye nesinki.
IMBONO ukusuka kwiflethi idlula kwimithi yepere emi-3 kwibala elikhulu. Lo mbono nawo unokonwatyiswa kwibhentshi yomthi phambi kwendlu (ngaphakathi kwendlu kukho itafile encinci kunye nezitulo ezisongwayo ezinokuthi zithathwe ngaphandle ukuze kwenziwe indawo entle YOKUHLALA NGAPHANDLE)
Ndibeka umzamo omkhulu wokugcina indawo icocekile kwaye ipholile kuba ndifuna zonke iindwendwe zam zizive zikhululekile, ziphumle kwaye zisekhaya. Yiza kwaye "czech" uyikhuphe, wamkelekile ngamaxesha onke! :)
Ukuba uhlala eVlineves, unokufumanisa ukuba bunjani ubomi bokwenyani baseCzech kangangoko unokonwabela iindawo eziphawulwayo zabakhenkethi ezikuhambo lokuhamba / ngebhayisekile okanye umgama omfutshane wokuqhuba.
I-Vlineves yidolophana encinane elunxwemeni lomlambo i-Elbe. Ime kanye kwindlela enkulu yomjikelo waseYurophu (i-Euro Velo 7, Indlela yeLanga) kufutshane kakhulu (4km) yesixeko sasebukhosini saseMELNIK (ngaphezulu kweminyaka engama-700 ubudala, edume ngezidiliya zayo kunye nemibono emihle yowona mlambo ubalulekileyo waseCzech. ukudibana). I-PRAGUE imalunga nemizuzu engama-30 xa uhamba ngemoto (iyure enye ngezithuthi zikawonke-wonke).
I-Vlineves kunye nelali yayo enkulu engudade i-Dolni Berkovice inabemi abadityanisiweyo be-1500. Phakathi kwabo bane-2 pubs/indawo zokutyela, ivenkile e-1, i-chateaux e-1 kunye ne-CHURCH enye enika umdla kakhulu. Le nkonzo yeneo-renaissance yakhiwa (emva kokuba eyangaphambili itshisiwe) ngo-1866 ngababini abadumileyo uJosef Zitek kunye noJosef Schulz abakwanoxanduva lweRudolfinum yasePrague, iThiyetha yeSizwe kunye neMyuziyam yeSizwe.
I-Vlineves yindawo entle yokusingwa yabathandi bendalo kunye nabantu bezemidlalo bangaphandle (ukunyuka intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukutyibiliza emgceni, ukuloba, ukuqubha, ukubaleka). Izuza kakhulu kwindawo yayo yendalo ekufutshane- kwelinye icala ukufikelela lula komlambo kunye nomzila wokujikeleza umlambo (i-100m ukusuka kwindlu, i-tarmac surface) kwaye kwelinye icala ukusuka kwindawo enkulu yamanzi ebizwa ngokuba yi-BARABA (endala inkwali yesanti ebuyiselweyo ngokwendalo) ebonelela ngamathuba amahle okuqubha (i-skinny dipping ifakiwe), iipikiniki, ukuhambahamba kunye nokukhwela (ukufikelela kumanzi akufutshane yi-600 m ukusuka kwindlu).
E-MELNIK unokuyonwabela ukutyelela i-Lobkowicz CASTLE, iSt. Peter & Paul CHURCH, i-TOWER yecawa eneembono ezintle, i-crypt OSSUARY yecawa (ixesha le-Hussite), i-CONFLUENCE VIEWING PROMENADE, iindawo zokutyela kunye neekhefi. Ungajonga kwakhona umahluko wesikwere seArcade yezembali (i-Namesti Miru) kunye nesikwere esikufutshane esiphantsi kovavanyo loyilo lwamaxesha obukomanisi (Namesti Karla IV).
Ngokuxhomekeke kwindlela ohamba ngayo (imoto/isithuthuthu/ibhayisekile) ungayandisa ihambo yakho ukuya e-KOKORINSKO (indawo ekhethekileyo yendalo/yasemaphandleni, i-15+ km, ukukhwela ilitye lentlabathi), i-RIP (induli eyahlukileyo edityaniswe nentsomi yabahlali baseCzech, I-16km), i-PRAGUE (injongo, enye yezona nkunzi ezintle kakhulu ngaphandle, i-40 km nge-D8), uMlada Boleslav (iMyuziyam ye-SKODA - umboniso wexesha lembali yemoto yemoto, i-53 km, i-50 mins drive), i-TEREZIN (WWII i-ghetto yamaYuda kunye nejele , ndwendwela, yiva ukoyikeka, nikela imbeko, funda kwaye uyixabise inyani osandula ukuyindwendwela , 50 km, 35 mins drive via D8). I-JESTED (igugu lokwakha elisuka kwi-60's transmitter / ivenkile yokutyela / ihotele / kunye nentwana yesiphekepheke encotsheni yentaba iJested, 105km, 1,5 hr drive).
Zininzi ezinye iindawo onokundwendwela kuzo ukuba ufuna into ethile, khawundiyeke ngokulula, uchaze iindlela zakho zokuhamba, izinto ezinomdla ngokubanzi kwaye ndiza kuzama ukuza nento enokulungela umdla wakho.
Umnini uhlala kwisakhiwo esinye kwaye uyafumaneka xa eceliwe.